2012 Zvemukati Kufanotaura kubva kune Pros | Martech Zone
2012 Zvemukati Kufungidzira kubva kune Pros
Chishanu, December 30, 2011 Chishanu, December 30, 2011 Douglas Karr
Joe Pulizzi isa pamwe chete runyorwa rwezvakafanotaurwa zvemukati zveiyo Content Marketing Institute kubva kune vangangoita 80 vanopa! Ini handisi kunyanya kufarira Predictions, kazhinji kazhinji vanhu vanenge vasirizvo nguva dzose… zvisinei nemamiriro uye masimba. Ini ndakatora zvishoma nzira inosetsa kune yangu mupiro ... asi Joe akaifarira uye akataura nezvayo seimwe yeiyo pamusoro 15!
Bhatani nyowani rinowedzerwa kunzvimbo dzekudyidzana… Iyo Bhatani "Shut Up" kune akanyarara troll uye vanhu vasinga wedzere chero kukosha kune hurukuro. Zvakanaka, pamwe hakusi kufungidzira, chingori chishuwo.
Mukutendeseka kose, zvakadaro, zvinoita sekunge zviri kuramba zvichinetsa mazuva ese kupaza ruzha uye nekuwana kukosha munzvimbo dzakakura nemipiro yakawanda kubva kuvanhu vazhinji. Twitter, Facebook uye LinkedIn zvazadzwa neSPAM uye nhaurirano isina zvainoreva… Google+ iri munzira. Ini zvechokwadi ndinotenda tinoda mamwe maalgorithms asingangoite kusimudzira zvinozivikanwa, asi izvo zvakare nyaradza trolls.
Vhidhiyo Kubatanidzwa neDhijitari
Njodzi dzeMombe neMadzinza
Doug, kuiswa kwe "kuvhara" bhatani kwaizove shanduko. Sezvo chikuva chemagariro chinova chinozivikanwa, mhando yezviri mukati inosvinudzwa. Kubva kuUsenet kuenda kuTwitter, chikuva chega chega chisina kumisikidzwa chakatambura zvakafanana mugumo.
Sezvo inopesana neruzhinji sezvazvinonzwika, kiyi yenzvimbo inobudirira yepamhepo ndeyekutaura curation.
Zvita 31, 2011 na10: 15 PM
Ndinofunga wakanyatsotaura, Tim! Pese pandinoona saiti ine SPAM mune zvayakataura, ini handina kana hanya nekupindura nekuti zvinoita sekunge havana hanya kuti ndiani arikupindura.